Shiinaha oo ku eedeeyay Mareykanka inuu ka dambeeyo faafida cudurka Coronavirus - Jowhar Somali Leader
Home News Shiinaha oo ku eedeeyay Mareykanka inuu ka dambeeyo faafida cudurka Coronavirus
Shiinaha oo ku eedeeyay Mareykanka inuu ka dambeeyo faafida cudurka Coronavirus
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha dibadda Shiinaha Zhao Lijian ayaa sheegay in Ciidamada Mareykanka ay Virus-ka cudurka Coronavirus geeyeen magaalada Wuhan oo aheyd halkii uu ka dilaacay cudurkan ku faafay adduunka oo dhan.
Zhao ayaa qoraal uu bartiisa twitterka ku qoray ku sheegay inuu laba jibaarmay tuhunka ay ka qabaan Mareykanka inuu ka dambeeyo faafida cudurkan.
“Ciidamada Mareykanka ayaa cudurkaas safmarka ah geeyay Wuhan, haddii arrintan cadaato waxaan Mareykanka ka sugeynaa faah faahin dhab ah”ayuu yiri Mr Zhao.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa u yeertay Safiirkeeda u fadhiya Washington, waxaana la filayaa in wax ka weydiiyo arrinta ku saabsan in Ciidamada Mareykanka ay geeyeen cudurkan magaalada Wuhan.
Eedeynta Shiinaha waxay u muuqatay inay la xiriirtay ka qeyb qaadashada Ciidanka Mareykanka ee Ciyaaraha Caalamiga ee Ciidamada Militariga ee lagu qabtay Wuhan bishii Oktoobar, kaasoo ay ku soo jiiteen tartamayaal ka kala socday in kabadan 100 waddan.
Waxaa soo baxayay warar sheegaya in cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ lagu farsameyn karo sheybaar kiimiko ah maadaama.
Cudurkan ayaa ku faafaya adduunka oo dhan, waxaana taasi keentay in la xiro iskuulada waxbarashada, lana joojiyo meelaha dadka isugu yimaadaan, sida ciyaaraha kala duwan oo ah goobaha ay dadka faraha badan isugu yimaadaan.